ကလိုစေးထူး: ယောက်ျားစိတ်ဓာတ် Vs မိန်းမစိတ်ဓာတ်
Posted by ကလိုစေးထူး at 10:00 PM
thank you for writing such kinda post. yeah ppl need to be more aware of this issue. I sometimes can't stand the stereotype view on us just because we are girls. Some of the Asian guys think they are superior than girls in every aspect though they are nothing and they also reluctant on praising girls when the girls do better job then they do. All we want is the equal right and respect.
May 16, 2007, 10:20:00 AM
ဟုတ်တယ် ကိုသံလွင်ရေ …
ယောက်ျား မိန်းမ ခွဲခြားပြီးပြောတာတွေ ကျမလည်း အလွန်မုန်းတယ်။
ကိုသံလွင်ရဲ့ အရင်ပို့စ်မှာလည်း ကျမ ကွန်မန့် ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခုဒီစာမှာတော့ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မရေးတော့ပါဘူး။
နငယ်ကို အမြီးတပ်သလို ဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ … ။
ကိုသံလွင်ကဲ့သို့ပဲ ကျမလည်း ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
၁၇၊ မေ၊ ၂၀၀၇
နေ့ ၁၁ နာရီ ၂၅
May 16, 2007, 11:57:00 PM
အမ မေ မသိလို့ မေးမယ်နော်။ နငယ်ကို အမြီးတပ် တယ်ဆိုတာ ဘာလဲဟင်၊ ကျွန်တော် မသိလို့ပါဗျာ..ကျွန်တော့ မျက်လုံးထဲတော့ နငယ်ကို အမှီးတက်ကြည့်တာ န-- (သို့) ---န ဒီပုံစံပဲ သွားမြင်တယ်။ ကျွန်တော်ကလဲ တုံးပါတယ်လေ။
May 18, 2007, 1:03:00 PM
ဟုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် နေတဲ့ နိုင်ငံမှာတော့ မိန်းမ အုပ်ချုပ်တဗျ။ တစ်ခါ တစ်ခါ မိန်မတွေ ကို ဂရုဆိုက်တာပိုနေတဲ့အတွက် လွန်လွန်းတယ်လို့ မြင်မိတယ်။ ကလေး တစ်ယောက်မွေးတာ ၃ နှစ် အိမ်မှာ အလကားနေ လို့ ရတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ယောင်္ကျားတွေကြတော့ ၁လတောင် မနဲ ခွင့်ယူရတဲပုံ။ လကုန်ဆို ကလေးအမေသုံးဘို့ နိုင်ငံတော်က ပိုက်စံ ဘဏ်အကောင့်ထဲ ရောက်နေလေရဲ့။ တကယ်တော့လဲ ကလေးမွေးရတဲ့ မိန်းကလေးတွေ တာဝန်ဟာ လဲ မလွယ်ဘူးဗျ။ အမေဆို ကျွန်တော့်ကို မွေးလို့ မရလို့ ဗိုက်တောင် ခွဲရတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့ အရမ်းချမ်းသာခဲ့ဘူးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကြီး ဒီလို မိန်းမသားတွေကို အခွင့်အရေးပေးရင် မကောင်းဘူးလာဗျာ။..
May 18, 2007, 1:33:00 PM
To ma min min
i am very interesting about ur current country . what country is it ?
May 18, 2007, 5:11:00 PM
to ko min min
sorry . pyar
i think " u r girl.
May 18, 2007, 5:13:00 PM
ကို ဂျင်မီလား မဂျင်မီလား
ဂျင်မီဆိုတာ ကြားဘူးနားဝ ယောင်္ကျားနာမည်မို့ ၊ ကို ဂျင်မီလို့ပဲ ခေါ်တော့မယ်။ ကိုစေးထူး ဘလော့ ထဲမှာ Topic တွေ လွဲကုန်တာ မကောင်းဘူးထင်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်တို့ ပြောရမှာ မိန်းမသားတွေကို ဦးစားပေးရေးလေ။ ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ နဲနဲတော့ ဆက်နွယ်နေတာမို့၊ Human right နဲ့ ပါတ်သက်လို့
Transparency International ရဲ့ Corruption Perceptions Index မှာ ဖင်လန်နိုင်ငံဟာ ၂၀၀၆ မှာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၆၃နိုင်ငံထဲမှ နံပါတ် (၁) ဖြစ်ပါသတဲ့။ သူ့လိုပဲ Iceland နှင့် New Zealand လဲ ရခင်နှစ်မှာ နံပါတ် (၁)ဖြစ်နေပါတယ်။
သီတင်းစာ လွတ်လပ်ရေး Reporters without Border မှာ ဖင်လန်နိုင်ငံဟာ ၅ နှစ် ဆက်တိုက် နံပါတ် (၁) ဖြစ်နေပါတယ်။
ပညာရေးအရ ဖင်လန်နိုင်ငံ ပညာရေး System သည် Gov မှ ပိုက်ဆံ အခမဲ့ ဆိုက်ပေးနေပါကြောင်း..ဘယ်သူမဆို ကျောင်းတွင် အခမဲ့ ကျောင်းတက်နိုင်ကြောင့် ၊ သိသလောက်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
May 19, 2007, 2:14:00 AM
ယောက်ျားတွေထဲက ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုကလိုစေထူးမှာ ခုလိုခံစားချက်ရှိတာ မြင်ရတော့ ၀မ်းသားအားရ ဖြစ်မိပါကြောင်းး)
မင်းမင်းရေ.. စကားမစပ်... စင်္ကာပူမှာတော့ မိန်းမတွေဟာ family and career balance ရဖို့ သက်ခဲယဉ်းတယ်လို့ အော်နေကြတယ် ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အလုပ်ရှင်တွေက ကလေးရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေကို သိပ်မခန့်ချင်ကြလို့တဲ့ ။ ကလေးရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက အလုပ်ချိန်ပိုမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေက ကလေးမွေးပြီးရင် ခွင့် ၁လယူလို့ရတယ်လေ ။
May 19, 2007, 9:18:00 PM
nice post. i like all of ur post.
i always respect to u.
Feb 18, 2008, 8:59:00 AM
လေးစားလို့ ကိုကို လို့ခေါ်ပါရစေ..
ဖတ်ရတာတော့ကြာပါပီ.. အခုမှ ကိုကို့ ဘလော့ကိုတွေ့တဲ့အပြင် ဗမာလိုလဲ ကြိုးစားရိုက်ရတာမို့
ဒါ့ ကို ကိုကို လို့ခေါ်ခွင့်ပေးပါနော်..။
ကိုကို့ စာတွေကို ဒါ အရမ်းလေးစားလို့ပါ
Feb 19, 2008, 6:46:00 PM
There arealot of guy who are useless than girl and they are not responsible than girl.
loat lel loat ma kwuay naing, hta bi nar lel kho ma sar chin del guy twe ka shi tay del.
pyaw byel yin lel yine yar kya mel
Nov 13, 2008, 2:07:00 AM
Your writings are very impressive. Thanks also for this post.
Jun 15, 2009, 11:10:00 PM
အကို့ရဲ့ အယူအဆကို နှင်းဆီ အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါတယ်....
နှင်းဆီလည်း မဝါဒီ မဟုတ်ပေမဲ့ ဒီလိုမျိုးမိန်းခလေးတွေကို နိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ ဟိုလိုဒီလို ပြောတာတွေကို လုံးဝမကြိုက်ိနိုင်ပါဘူး...
အမျိုးသမီးလေးတွေကြောင့် တိုးတက်အောင်မြင်တဲ့ လုပ်ငန်း တိုင်းပြည်တွေအများကြီးရှီနေပါတယ်...
လေးစားပါတယ်ရှင် ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန် စိတ်ထားလေးထားနိုင် တွေးနိုင်ပေးတာကို....
ဖြစ်နိုင်ရင် နှင်းဆီ အကို့ပိုစ့်လေးကို နှင်းဆီရဲ့ ဘလောက့်လေးမှာ ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်ရှင်....
Jan 14, 2010, 12:38:00 PM